Umvelisi wamanzi we-backProof ye-BackPick | Indawo
Ukunikezelwa kwetekhnoloji yamanzi yeengxowa
Umenzi ophambili okhokelo lweegiya eziphathwayo ngaphandle.
Umgangatho olizimeleyo, kunye nelabhoratri yetekhnoloji ephezulu yegiya ephezulu kunye nezixhobo zokuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Underwater Touch Screen Cell okungangenwa mfono Bag WPC32138
phawu:1.10M Underwater Screen Touch kunye Double Unique Faces Design - The ngaphambili square ehamba screen touch isekela ubuso igridi, kwaye kucacile ezibhityileyo window umva ivumela touch screen ukusebenza ngokupheleleyo ezisetyenziswa imihla ngemihla ezifana umnxeba, itekisi, iifoto, ividiyo okanye lokhangelo akhululeke. Sebenza iqhosha ekhaya sokuvula ubuso-ID, kodwa AKUKHO yeminwe Iimpawu.Phatha 2.Portable Intamo yenkomo - Wehla yenkomo detachable kunye ukuyona eqinile ilenga entanyeni ngokukhululekileyo. Easy ngophatho cell phone ngaphandle izandla xa imvula ngaphandle, kitche ukupheka.3.Secure IPX8 Case okungangenwa - Superior ye Polyvinyl chloride (PVC) istili nezitshixo ukujikajika 2 kunye umboniso kuvalwa ezingavuziyo londoloza cell phone yakho kuzo zonke iintlobo bume ngqwabalala emanzini, ikhephu, isanti, emanzi, nothuli nobunye ubumdaka.4.Multifunctional Phone okungangenwa Dry Bag: Ingaba ibe yokugcina izinto bag ezomileyo ID, credit cards, imali, player MP3 kunye nezitshixo.Phawula:1. Vavanya umsebenzi manzi kunye zomzimba phambi lonke ixesha usebenzisa;2. Xa kuthelekiswa ezininzi pouches yefowuni manzi kwiimarike, abo bethu sebenza kuzo zonke amaqhosha ekhaya (kubandakanywa iPhone 7/8/7 Plus / 8Plus; Kwakhona, ubukhulu-yenzelwe ngokukodwa window ngokubanzi (8% ngaphezulu) kuzisa amava olubonakalayo ngcono ;3. Zonke amachweba kunye namaqhosha zibe lula, kodwa hayi kwebala ID weminwe;4. Kulula ukubeka okanye uthathe i phones smart emva ukuvuthela umoya ngexesha embalwa yokuqala ukusetyenziswa.
I-Poultifontial Ibin ye-Prospinaction Bater, Ingxowa yokuloba BB02
Iimbonakalo:1.Umbhalo owongelayo: Ingasetyenziselwa ukuhlamba iziqhamo kunye nemifuno, ivenkile okanye njengebhakethi yenyawo, ilungele ukuhamba, ukunyuka intaba, intaba kunye nezinye izinto ezininzi zangaphandle.2.Umgangatho onguMgangatho onguMgangatho: Sisebenzisa i-PVC ilaphu njengempahla, eyomeleleyo kwaye ilawula umgangatho wemveliso.3.Ukuba amanyathelo okhetho: Sinokhetho lwe-10l kunye no-20l kunye nobukhulu obungafakwanga φ9.8 Ngokulandelelana. Iintsimbi ze-0.5lb kunye ne-0.7lb ngokulandelelana. Ungakhetha ubungakanani obathandayo.I-Footerproof kunye ne-leakproof: Umzantsi wenziwa ngoyilo lwaManzi aluhlaza, olunokuthintela ukuphucula ukuvuza kunye nokubonelela lula ekusebenziseni imisebenzi emininzi yebhakethi.8.Usenziwa izibambo: Izibambisi eziqinisekisiweyo zenziwe kumacala omabini e-bhakethi, ukuvumela ukuba uphathe ngcono izinto. Ngumncedisi olungileyo wokuhamba ekhaya.
Iimbonakalo:1.Ukuhlala-bonke-zonke ibhokisi ye-motorproofproof yemoto ilungele ukwenzakala okuninzi2.18l Umthamo omkhulu: Ibhokisi nganye yi-12.2 * 12.2 * 8.3in, inobunzima obungaphantsi kwe-1820 yeegram kodwa i-25kg.I-3.100% yangamanzi ngokupheleleyo: usebenzisa i-0.5mm ye-0.5mm ye-Tarpaulin Ilaphu, ojikelezileyo kwaye lube ngamazantsi amnandi oPhezulu, ngaphandle kwe-pinhole, ukuqinisekisa i-100% yamanzi.4.5 Imizuzwana yokugoba ngokulula: Ngendlela yokungasongela imizuzwana, inokusongelwa kubungakanani be-iPad kwimizuzwana emi-5. Iphatheke kakhulu kwaye ilungele.Umgangatho we-5ight Umgangatho: Sisebenzisa i-Tarabrin efanayo ye-Ultra-Mulick kunye nenkqubo yokucinezelwa kobushushu obucokisekileyo njengeKayak, kwaye idlulile ukusebenza ngokungqongqo, ukuchasana nokuchasana nokuchasana nokuchasana nokuchasana nokuchasana nokungachanekanga. I-velcro yesibini yongezwa ezantsi ukuthintela ukutyibilika xa ifakwe kwi-trunk yemoto.
I-upale ethambileyo i-terpack 30l cb010-30
Iimbonakalo:1. I-TPU engalunganga ye-nylon engaphandle i-nylon i-nylon i-nylon ingamanzi, ukugxothwa, i-UV kunye nokunganyangeki kwamachiza2. I-Sinmouth iyenza ukuba ilayishwe ngokulula kwaye ilayishe3. Isiseko semisebenzi enzima igubungela ezantsi ukukhusela e-AbrasionI-3.UFRAFFEX Hloware iquka amanqaku aphantsiI-4.2-Inch ngokubanzi ye-padage5.30 I-Qt Umthamo we-QT ene-liner yebanga lokutya, ipokotho yasekhaya enganyangekiyo6.Leakproof itywina lokufumana iziqulatho, inkqubo yokufikelela kwi-winseryI-7.Pilium i-Icermal i-Frivel, igcina i-ice ukuya kwiintsuku ezingama-3+8.USONICID, isiseko esinzima
1. r&I-DAIKER: Ngaphezulu kwe-15 r&Iinjineli zoqeqesho ezinamava atyebileyo, ezilungileyo kwimbonakalo yemveliso kunye noyilo, uyilo lokubumba, uvavanyo lwemveliso kunye nophuculo lwenkqubo njl.njl.
2. Ukuveliswa kwemveliso: Olona Matshini uphezulu kwishishini, kubandakanya ukuzimela izixhobo zokuvelisa ezizenzekelayo, izixhobo zokudibanisa ezizenzekelayo, ezinceda ekuphumezeni iodolo yakho ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
3. Gcwalisa inkqubo ye-QC: Kwizixhobo ezingafunekiyo kwiimveliso ezigqityiweyo, inkqubo engqongqo ye-QC yenze umgangatho wemveliso 'onokuthembeka ngakumbi kwaye uzinzile.
4. Isiqinisekiso: Inkampani ephezulu ye-teknoloji eqinisekisiweyo yiZiko likaRhulumente, i-BSCI kunye neDisney Olc eqinisekisiweyo, eyamkelwe yi-Amazon Costrlellers njl.
5. I-OMBI-STOP ye-OEM / IENKONZO ZE-ODM: ngolwazi oluqinileyo lwezixhobo, ukulila, ukulungisa, oomatshini kunye nezixhobo ezibonelela ngemvume yokuphela kwemvume yokuveliswa kwabathengi. Sithumela ngokusemthethweni izimvo zakho kwaye siqinisekise iprojekthi yakho. Iimveliso zethu eziphambili:Ibhegi yefowuni yamanzi,Ibhegi yomthwalo, Ibhegi yocolile,I-backproof yendawo yokugcina amanzi, Ibhegi yebhayisekile,Ibhegi eyomileyo.
Siyaqhubeka nokuphuhlisa itekhnoloji entsha kunye nokuphucula umgangatho weemveliso zemidlalo yendawo.
Ukusekwa ngo-2010 Iimveliso zethu zibandakanya amatyala efowuni ye-waterproof kunye neengxowa zendawo ezichasene namanzi okanye amanzi anqabileyo, iingxowa ze-backproost Cooler, iingxowa zebhayisikile. Iingxowa zamanzi ezinamanzi, iingxowa zamanzi ezinamanzi,I-backproof yendawo yokugcina amanzi, Iphuli yehlathi yangaphandle kunye nangaphezulu
Iiofisi zeMidlalo yeZakhiwo kunye neefektri zombini zikwiShenzhen China. Ukususela ngaphezulu kwe-3000 S.Q. Iimitha ezinabasebenzi abamalunga ne-150. Siqhayisa isiseko esizimeleyo semveliso ngoyilo olomeleleyo kwaye r&Iqela le-D. ngechiza elinamalungelo enkampani. Amaziko ethu aquka izityalo ezizenzekelayo ezizenzekelayo, iworkshop yokuchonga. Umgangatho olizimeleyo, kunye nelabhoratri yetekhnoloji ephezulu yegiya ephezulu kunye nezixhobo zokuqinisekisa umgangatho wemveliso.